Kasukuwere: Abaqondisi Bamakhansili Kabakhuphulelwe Iholo
Lwezi 11, 2016
Umphathintambo wezabelo lentuthuko yamadolobho, uMnu. Savior Kasukuwere, usethethe isinqumo sokuthi amakhansili alakho ukukhuphula iholo lezisenenzi ezilezikundla eziphezulu ezinye ezivele zithola iholo elingaba ngamadola edlula inkulungwane ezilitshumi, i$10,000 ngenyanga.
Lesi sinqumo siza lanxa uhulumende wayemise ukukhuphula iholo lezisebenzi zamakhansili kulandela ukukhalaza kukazulu owamangaliswa yibunengi beholo lezisebenzi zabanye omanisipala, elalisedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili, i$20,000 ngenyanga.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnu. Rejoice Ngwenya, utshele iStudio 7 ukuthi njengoba amakhansili ekhokhelwa libandla le eiphikisayo ele Movement for Democratic Change (MDC-T), uKasukuwere ukhanya elenjongo engacaciyo.
Amakampani amenengi kahulumende ayeholisa abaqondisi imali enengi okumangalisayo okwenza ukuthi bacine beyiphungula kulandela ukukhonona kukazulu.
Abaqondisi bamankampani amanengi bebekhomba ngophakathi izisebenzi zisidla ingqweqwe zomlomo.